စနေနေ့၊ ဇွန်လ 27 ရက် 2009 ခုနှစ် 12 နာရီ 22 မိနစ်
သံတမန်ရေးရာဆိုတာ ကန့်သတ်မှု ရှိပါတယ်
၂၀၀၇ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ဖြစ်တုန်းက တကြိမ်၊ နာဂစ်မှာ တကြိမ်၊ အခု ဒေါ်စုကို တရားစွဲဆိုရာမှာ တကြိမ်၊ ပြည်တွင်းမှာ လှုပ်ရှားမှုဖြစ်တိုင်း ပြည်ပမှာ ကုလမဂ္ဂ ဝင်ပါတော့လား၊ အမေရိကန် ဝင်ပါတော့လား စသည်ဖြင့် တောင်းဆိုမှုတွေ ကြီးထွားတတ်ပါတယ်။ မီဒီယာတွေမှာလည်း အသံတွေ ဆူညံတတ်တာကြောင့် သံတမန်အကြောင်းနဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲတွေကို ဆွေးနွေးပါရစေ။ ဒီအပိုင်းက အထဲက ပရိသတ်ကို ပိုရည်စူးတာပါ။ အကြောင်းက ကျနော်နဲ့ မိသားစုချင်း ရင်းနှီးတဲ့ ငယ်ငယ်ကတည်းက သိခဲ့တဲ့ မဆလအစိုးရက ပြန်ခေါ်လို့သာ ပြန်လာရလုိ့ ပါရဂူဘွဲ့မရခဲ့ပေမယ့် ပါရဂူအဆင့်ရှိတဲ့ ပညာတတ်တယောက်နဲ့ ပြန်လည်တွေ့ဆုံရတဲ့အခါမှာ ယူအန် (UN) က ဘာလုပ်နေလဲလို့ မေးတာ ကြုံဖူးလို့ပါ။
UN ဆိုတာက နိုင်ငံတိုင်းကို ပြဿနာပေါ်တိုင်း ဝင်မစွက်ဖက်နိုင်ပါဘူး။ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဟာ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီက စေခိုင်းတဲ့အတိုင်း လုပ်ရတာပါ။ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ တချက်လွှတ်အာဏာ Veto Power ရှိတဲ့ နိုင်ငံ ၅ နိုင်ငံကို ကြီး ၅ ကြီးလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံ ၅ နိုင်ငံကပဲ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ အမြဲပါဝင်ပြီး ကျန်နိုင်ငံတွေက အလှည့်ကျသာ ပါဝင်ရပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကို နိုင်ခဲ့တဲ့ မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်၊ အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ ဆိုဗီယက်နဲ့ နောက်မှ တရုတ် ပါလာတာပါ။ ဒါကြောင့် ဒီဗီတိုအာဏာရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေက သဘောမတူဘဲ ဘာမှ လုပ်လို့ မရပါ။
ကိုရီးယားစစ်မှာပဲ ဆိုဗီယက်ကိုယ်စားလှယ် ရေချိုးခန်းအသွားမှာ မဲခွဲခဲ့လို့ UN က ကိုရီးယားမှာ ဝင်ခွင့်ရခဲ့တာပါ။ (မှတ်ချက် - ထိုစဉ်က တရုတ် မပါသေးပါ။ ထိုင်ဝမ်ကို အသိအမှတ်ပြုကြပါသေးတယ်။) ယူဂိုဆလပ်နိုင်ငံ ကွဲထွက်သွားပြီး ဘော့စနီးယားစစ်ပွဲမှာ ဆိုဗီယက်ဗီတိုကို UN မှာ မကျော်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် UN အပြင်ဘက်က နေတိုး NATO အနေနဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေက ဝင်စွက်ဖက်ခဲ့ကြရတာပါ။
ဒါကြောင့် UN မှာ ပြဿနာတခုကို တင်ချင်ရင် ကြီး ၅ ကြီးထဲက တနိုင်ငံက မကန့်ကွက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ထို့ပြင် UN မှာ ကိုယ်ပိုင်စစ်တပ်မရှိပါ။ UN အဖွဲ့ဝင်တွေဆီက တပ်ကို တောင်းခံရပါတယ်။ ထို့အတွက် UN ပါဝင်ကိုင်တွယ်လာဖို့ ကမ္ဘာ့အင်အားကြီး နိုင်ငံကြီးတွေအကြား နိုင်ငံရေးကို နားလည်ရပါမယ်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာ အရှေ့နဲ့ အနောက်ဆိုပြီး ကွန်မြူနစ်စနစ် ကျင့်သုံးသော နိုင်ငံတွေနဲ့ ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးတဲ့ နိုင်ငံတွေဆိုပြီး ကမ္ဘာကြီးဟာ ၂ ခြမ်းကွဲနေခဲ့ပါတယ်။ ဆိုဗီယက် ရုရှားပြိုကွဲပြီး ကမ္ဘာမှာ ကွန်မြူနစ်စနစ် ကျဆုံးသွားအပြီး တရုတ်ကလည်း တိန်ရှောင်ပိန်ရဲ့ ဈေးကွက်စီးပွားရေး အပြောင်းအလဲ ကြားကာလဖြစ်နေတော့ ကမ္ဘာ့အင်အားကြီး မဟာအင်အားကြီး ဆူပါ ပါဝါအဖြစ် အမေရိကန်ပဲ ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမ အီရတ်စစ်မှာ အမေရိကန်က Smart Bombs လို့ခေါ်သော အစွမ်းထက်တဲ့ ဗုံးတွေသုံးပြီး စစ်အင်အားပြခဲ့ရာ အမေရိကန်ရဲ့ အရှိန်ဟာ ကမ္ဘာမှာ ကြီးမားခဲ့ပါတယ်။
ဆိုဗီယက်တွေဟာ ယဲ့လ်ဆင် လက်ထက်မှာ ကွန်မြူနစ်စီးပွားရေးစနစ်မှ ဈေးကွက် စီးပွားရေးအပြောင်းမှာ GDP စုစုပေါင်း ထွက်ကုန်ဟာ ၄ဝ % မျှ ချွတ်ခြုံကျသွားပါတယ်။ အမေရိကန် စီးပွားရေးပညာရှင်တွေက တချီတည်း ပြောင်းရမယ်။ Shock Treatment ဆိုပြီး ဖိအားပေးလမ်းညွှန်ခဲ့ပါတယ်။ အရက်နဲ့ တွဲဖက်နေတတ်တဲ့ ယဲ့လ်ဆင်ကလည်း နိုင်ငံပိုင် လုပ်ငန်းကြီးများကို အလကားပေးသလောက်နီးနီး ရောင်းခဲ့ရာ တေဇတို့လို ခေတ်ပေါ်သူဋ္ဌေးကြီးတွေ ပေါ်လာပြီး စီးပွားရေး ဖရိုဖရဲ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အစိုးရမှာ ငွေမရှိတော့ ဆိုဗီယက်စစ်တပ်မှာလည်း ဖရိုဖရဲနဲ့ စစ်အင်အားကို လျော့ရတော့ စစ်တပ်လည်း တပ်ပျက်လုနီးပါး ချို့ယွင်းအားနည်းခဲ့ပါတယ်။
ဒီိလို ရုရှားနိုင်ငံ ကျွမ်းထိုးမှောက်ခုံ ဖြစ်နေချိန်မှာ ကမ္ဘာမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံ တနိုင်ငံပဲ ဆူပါပါဝါ နိုင်ငံအဖြစ် ကျန်ပါတော့တယ်။ ဆိုဗီယက်အင်ပါယာကြီး ပြိုကွဲချိန်မှာ အရှေ့ဥရောပ နိုင်ငံတွေကလည်း ခွဲထွက်ကာ လွတ်လပ်ရေး တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလို ရုရှားနိုင်ငံဟာ ပြိုကွဲနိမ့်ကျချိန်မှာ အမေရိကန်ပေါ်လစီ ဖော်ထုတ်သူတချို့က အရင်က ပြိုင်ဘက်ကို အငြိုးနဲ့နှိမ်ခဲ့ကြတယ်။ အကြောင်းအကျိုး အားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် ပြင်းထန်တဲ့ ရုရှား မျိုးချစ် Nationalists တွေက အမေရိကန်အပေါ် စိတ်နာကြတယ်။
ဒါကို အသေးစိတ် စောင့်ကြည့်ပြီး သင်ခန်းစာ ယူနေတာကတော့ တရုတ်ကြီးပဲ။ ဒါကြောင့် တရုတ်ကြီးက တချီထဲနဲ့ မရမ်းဘူး။ ဖြေးဖြေးချင်းလှမ်းပြီး ဈေးကွက်စနစ်ကို ပြောင်းတယ်။ တိန်လျှောက်ဖိန် မှာခဲ့တဲ့ စကားမှာ ကျောက်ခဲတွေကို သေချာနင်းပြီး ချောင်းကိုဖြတ်ပါ လို့ ဥပမာပေးပါတယ်။ crossing the river by feeling the stones.
ယဲ့လ်ဆင်ရဲ့ သတ္တမ သတ်တမ်းအပြီးမှာ မထင်မှတ်ဘဲ နိုင်ငံရေး အသက်နုသေးတဲ့ အရင်က KGB ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိ ပူတင် က သမ္မတဖြစ်လာတယ်။ ပူတင်က မျိုးချစ်၊ ဒိအပြင် လူငယ်ပီပီ ကြမ်းတယ်၊ သွက်တယ်၊ လက်မြန်တယ်။ ဒါကြောင့် ပူတင်က အချောင်ရထားတဲ့ သူဋ္ဌေးတွေရဲ့ ကုမ္ပဏီအချို့ကို ပြန်သိမ်းပြီး ဖရိုဖရဲ ဖြစ်နေတဲ့ စီးပွားရေးကို ပြန်ကိုင်ခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့် ပူတင်ကို ယှဉ်ရဲသူတွေကို ကုမ္ပဏီလည်း သိမ်း၊ ထောင်ပါချပစ်လိုက်တယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေက ဝေဖန်သူတွေကတော့ အာဏာရှင်ဆန်တယ်လို့ ဝေဖန်ကြတာပေါ့။ ပူတင် လက်ထက်မှာ ရုရှားတွေရဲ့ စီးပွားရေးဟာ ပြန်ပြီး ဦးထောင်လာတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်မှာ ကမ္ဘာ့ရေနံဈေးတွေ ခေါင်ခိုက်အောင် တက်နေတော့ ရုရှားရဲ့ စီးပွားရေး အရှိန်ဟာတက်လာတယ်။ ရေနံနိုင်ငံတွေ စုစည်းထားတဲ့ OPEC အဖွဲ့အပြင်မှာ ဆော်ဒီပြီးရင် ရုရှားက ရေနံအထွက်ဆုံးပဲ။ ထို့ပြင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ Natural Gas မှာ ရုရှားက နံပါတ် ၁ ပဲ။ (မှတ်ချက် မြန်မာနိုင်ငံက နံပါတ် ၁၁ မှာ ရှိပါတယ်)။ အနောက်ဥရောပက ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းအထက် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ကို ရုရှားက ဝယ်ယူရပါတယ်။ ရုရှားတွေအပေါ်စွမ်းအင်အတွက်မှီခိုလာရတယ်။
ရုရှားတွေ ကွန်မြူနစ် စံနစ်ကအပြောင်း ယဲ့လ်ဆင်ရဲ့ ဖရိုဖရဲ ကာလမှာ အမေရိကန်တွေ လူပါးဝ ထားတာကို ရုရှားမျိုးချစ်တွေက မမေ့ဘူး။ ဒိအပြင်မှာ နေတိုး NATO က ဝါဆောစာချုပ် Warsaw Pact ပျက်သွားတာတောင်၊ ရန်သူမရှိတော့တာတောင်၊ ထပ်မံတိုးချဲ့လာနေတယ်။
သမ္မတ ကလင်တန်လက်ထက်မှာ ဘော့စနီးယားနဲ့ ဆာဗီးယားကို ဝင်စွက်ထားတာကိုလည်း ရုရှားက ကြည့်မရဘူး။ ဆာ့ဖ်လူမျိုးတွေက Serbs တွေက ရုရှားနဲ့ လူမျိုးတူတွေကိုး။ အခုလဲ အမေရိကန်က ဒုံးပျံကို ကာကွယ်ဖို့ ဒုံးပျံ Anti Ballistic Missiles တွေကို ပိုလန်နဲ့ ချက်စ်မှာ တပ်ဆင်ဖို့ အစီအစဉ်အတွက် ငြင်းခုံနေကြတယ်။ အခုလက်ရှိ ရုရှားသမ္မတဟာ ပူတင်ရဲ့ လူစာရင်း။ ဥပဒေအရ ပူတင်က ဆက်အရွေးမခံနိုင်လို့ ဝန်ကြီးချုပ် ဆင်းလုပ်ပြီး ဥပဒေပြင်ဆင်ပြီး သမ္မတ တခါထပ်ပြန် အရွေးခံမယ်လို့ အတွင်းသိတွေက ယူဆကြတယ်။ လက်ရှိရုရှားမှာ ပူတင်ကို လူကြိုက်များတယ်။
တရုတ်ကြီးက သိပ်လည်တယ်။ အမေရိကန်ကို ရန်မရှာသေးဘူး။ အနှစ် ၃ဝ ကျော်ကျော် အမေရိကန်နဲ့ တည့်အောင်ပေါင်းပြီး အမေရိကားကို တရုတ်လုပ် ပေါချောင်ကောင်းပစ္စည်းတွေ တွင်တွင်တင်ပို့ပြီး အမေရိကန်အလုပ်ရုံ စက်ရုံတွေ ပိတ်ပြီး တရုတ်ပြည်ကြီးမှာ စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေ ပေါ်လာတော့ တရုတ်တွေ အလုပ်ရ ငွေပေါလာတာပေါ့။ အမေရိကန်တွေက ငွေနောက်လိုက်ပြီး စွတ်ဝယ်၊ တရုတ်ကလည်း နင်းကန်ပို့ ဆိုတော့ တရုတ်မှာ နိုင်ငံခြားငွေတွေ မတရား ပိုနေတာပေါ့။ အမေရိကန်အစိုးရက လိုငွေ (Deficit) အတွက် ချေးဖို့ ထုတ်ရောင်းရတဲ့ TBill လို့ခေါ်တဲ့ Treasury Bills တွေကို တရုတ်က ဝယ်တော့ အတိုးလည်းရပြီး၊ အမေရိကန်ရဲ့ အကြွေးရှင် မြီရှင်နိုင်ငံ ဖြစ်လာတယ်။ အမေရိကန်က တရုတ်အပေါ် TBill ဒေါ်လာ ၇၆၃.၅ ဘီလျီယံ ( ၁ ဘီလီယံ= ၁ဝဝဝ သန်း) ဖိုး အကြွေးတင်လျက်ရှိတယ်။ အမေရိကန် စီပွားရေးဝန်ကြီးက ပီကင်းမှာ အမေရိကန် TBills တွေကို တရုတ်ကဆက်ဝယ်ဖို့ မျက်နှာချိုသွေးနေရတယ်။
နိုင်ငံတနိုင်ငံဟာ ငွေရှိမှ စစ်တပ်ကို ထူထောင်နိုင်တယ်။ ငွေက ဝင်ငွေကောင်းမှ၊ စီးပွားရေးကောင်းမှ ငွေ ရှိမှာကိုး။ တရုတ်စစ်တပ်ဟာ လူဦးရေ အများဆုံး စစ်တပ်ဖြစ်ပေမဲ့ စစ်ပစ္စည်းမှာ ခေတ်မမီလှသေးဘူး။ ပြည်တွင်းစစ်မှာကတည်းက တရုတ်စစ်တပ်ကို ကွန်မြူနစ် ပါတီက အုပ်စိုးထားတယ်။ တရုတ် ဒုစစ်သေနာပတိက Peng Dehuai က စစ်သားပီသတဲ့ စစ်တပ် Professional Army ဖြစ်စေချင်တာကြောင့် မော်နဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့တာကြောင့် အဖြုတ်ခံရပြီး ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေးတုန်းက ဦးထုပ်ကြီးတွေဆောင်းပြီး လူထုအရှေ့မှာ အနှိပ်စက်ခံရတယ်။ အခုမှ တရုတ်က ငွေရှိလာမှ Professional Army ကို ထူထောင်လာကြတာပါ။
အထူးသဖြင့် တရုတ်ရေတပ်ဟာ အရင်က ကမ်းခြေစောင့်ရေတပ် အသွင်ပဲ ရှိတယ်။ အခုမှ ပင်လယ်ပြာရေတပ် Blue Water Navy ကမ္ဘာကို ဖြန့်နိုင်တဲ့ ရေတပ်အဖြစ် အသွင်ကူးပြောင်းလျက်ရှိတယ်။ တရုတ်က ဂြိုဟ်တု Satellite ကို မြေပြင်က ပစ်ချပြနိုင်ခဲ့သလို အခုလေယာဉ်တင် သဘောင်္ Air Craft Carrier ဆောက်နေပြီ။ အမေရိကန်ရဲ့ စစ်သုံးစရိတ်ဟာ ဘီလျံ ၅ဝဝ ကျော်ရှိပြီး ဥရောပနိုင်ငံနဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေ အားလုံးပေါင်းရဲ့ စစ်စရိတ်ထက် များတယ်။ အခု ဒုတိယ တရုတ်က ဘီလျံ ၈ဝ ကျော်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီမှာ အာကာသ Space နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်တွေ မပါသေးဘူး။ တရုတ်က စစ်အသုံးစရိတ် များလာတာ ထင်ရှားတယ်။
အမေရိကန်က အီရတ်ကို ဝင်အသိမ်းပြီးမှာ အမေရိကန်ရဲ့ စစ်အင်အား တိုးချဲ့မှုကို ရင်ဆိုင်ဖို့ တရုတ်နဲ့ ရုရှား ပေါင်းပြီး ရှန်ဟိုင်းအတူ ပူးပေါင်းရေးအဖွဲ့ Shanghai Cooperation Organization SCO ကို အားဖြည့်ခဲ့ကြတယ်။ ၆ နိုင်ငံ ပါဝင်တဲ့ SCO ဆိုတာက တရုတ်၊ ရုရှားနဲ့ အရင် ဆိုဗီယက်အင်ပါယာဝင် နိုင်ငံအချို့ကို စွဲခေါ်ပြီး ဖွဲ့ထားတဲ့ အဖွဲ့ပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ လကမှ (မေလ ၂ဝဝ၉) သီရိလင်္ကာမှာ အစိုးရက Tiger တွေလို့ နာမည်ကြီးတဲ့ တမီလ်ကျားသူပုန်တွေကို အနိုင်ရပြီး အနှစ် ၂ဝ ကျော် ကြာခဲ့တဲ့ သူပုန်ထမှုကို အောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီ ကျားသူပုန် ခေါင်းဆောင်ဟာ အင်မတန် ရက်စက်တယ်။ ကျားသူပုန် ခေါင်းဆောင်တွေကို အစိုးရတပ်တွေ ဝိုင်းထားတုန်း အစိုးရတပ်တွေ ဗုံးကြဲတာကြောင့် အရပ်သားတွေ သေရပါတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေ ထွက်လာပြီး ဒီမိုကရေစီ ကျင့်သုံးတဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေက သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကို ဖိအားပေးလာတယ်။ ချက်ချင်း တရုတ်နဲ့ ရုရှားက သီရိလင်္ကာအစိုးရကို ရှန်ဟိုင်းအုပ်စု အစည်းအဝေးကို ဆွေးနွေးဘက် Dialogue-Partner အနေနဲ့ တက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်။ တရုတ်ကော ရုရှားကပါ ချီးကျူးသဝဏ်လွှာတွေ ပေးပို့ခဲ့တယ်။
ဒုတိယ အီရတ်စစ်ပွဲ မတိုင်ခင်မှာ အမေရိကန် နိုင်ငံဟာ တဦးတည်းသော ဆူပါပါဝါအပြင် စစ်အင်အား အကြီးဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်တာကြောင့် ဆူပါပါဝါထက်လွန်တဲ့ ဟိုင်ပါပါဝါ Hyper power ဆိုပြီး တံခွန်လွင့် နိုင်ခဲ့တာပေါ့။ နိုင်ငံရေးမကျွမ်းတဲ့ သမ္မတ ဘုရှ် Bush က အီရတ်ကို ဝင်သိမ်းပြီး လွယ်လွယ်နဲ့ ပြီးမယ်ထင်ခဲ့တာ အီရတ်တွေက ကိုယ့်နိုင်ငံကို ကျူးကျော်လာတာကို မခံနိုင်ဘဲ တော်လှန်တော့ အမေရိကန်စစ်တပ်က မပြင်ထားတဲ့ စစ်ပွဲကို ဆင်နွဲရတော့ သေကြပျက်စီးမှုတွေ များကုန်ပြီး ရပ်လို့မရ ဖြစ်ရော။ စစ်ရေးအရ Hyper Power အဆင့်က ပြုတ်ကျတာပေါ့။ 2007 ခုနှစ် စီးပွားရေးအကျပ်အတည်း Economic Crisis လည်းဖြစ်ရော အမေရိကန်ရဲ့ အရှိန်နဲ့ သိက္ခာဟာ ထပ်ပြုတ်ကျတာပေါ့။
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီးမှာ အမေရိကန် သမ္မတ ရူဗ်စဗဲ့လ် Roosevelt နဲ့ ဆော်ဒီဘုရင် ဆော့ဒ် Saud တို့ တွေ့ပြီး ဆော်ဒီတွေက ရေနံပေးမယ်၊ အမေရိကန်က လုံခြုံရေးပေးဖို့ ကတိပြုခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ရေနံကို အမေရိကန် ဒေါ်လာနဲ့ အရောင်းအဝယ် ဒီနေ့အထိ လုပ်ကြရပြီး အနှစ် ၄ဝ ကျော်ကျော် ဆော်ဒီက ရေနံဈေးကို ထိန်းခဲ့တယ်။ အမေရိကန်ကလည်း စည်းမရှိ၊ ကမ်းမရှိ ရေနံဈေး ပေါပေါနဲ့ ရလို့၊ တရဟော ပစ်ဝယ်ခဲ့တယ်။ လက်ရှိခေတ်ဟာ ရေနံခေတ်လို့ ဆိုရမယ်။ ရေနံကို အဓိက သုံးတာ ၃ မျိုး ရှိတယ်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်ထုတ်တဲ့ စက်ရုံတွေလည်ဖို့ရယ်၊ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးယာဉ် ကား၊ လေယာဉ်၊ သဘောင်္ စတာတွေ မောင်းဖို့ရယ်၊ Industrial By Product လို့ခေါ်တဲ့ စက်မှုပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရာမှာ သုံးတယ်။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုများတာနဲ့ စက်ရုံတွေလည်ဖို့ လျှပ်စစ်လိုတယ်။ ၂၁ ရာစုအဝင်မှာ အနှစ် ၂ဝ ကြီးထွားလာတဲ့ တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယရဲ့ စက်ရုံတွေလည်ဖို့ ရေနံတွေ ပိုလိုအပ်လာတယ်။ ရေနံဆိုတာ အခုလိုမှ အခုသွားတူးလို့ မရပါ။ ရေနံတွင်း တတွင်းပေါ်ဖို့ အနည်းဆုံး ၅ နှစ်ကြာပြီး အရင်းအနှီး များပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေနံဟာ Finite Number လို့ခေါ်တဲ့ တနေ့တာ ထွက်တဲ့ (အတိအကျ) အရည်အတွက် ရေနံစည် (Barrel) ပဲ ရှိပါတယ်။ တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယရဲ့ လိုအပ်ချက် (Demand) က များလာသလို အမေရိကန်က သုံးစွဲမှု Consumption ကို မလျှော့တော့ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်မှာ ရေနံဟာ လိုအပ်ချက်နဲ့ ဖြည့်ဆည်းချက် (Supply and Demand) မမျှတာကြောင့် ဈေးအဆမတန် တက်လာပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဆော်ဒီက ရေနံအများဆုံးရှိလို့ ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမေရိကန်နိုင်ငံက ရေနံဈေးကွက်ကို လွှမ်းမိုးထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တရုတ်က ရေနံရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေကို လိုက်ပေါင်း - လိုက်စုရတာပေါ့။
ရေနံကို မီးရှို့ရင် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် (CO2) ထွက်တယ်။ ဒါက လေထုကို ညစ်ညမ်းစေတယ်။ ဒါကြောင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်ထုတ်တဲ့ စက်ရုံတွေကို သဘာဝဓာတ်ငွေ့ Natural Gas သုံးတဲ့ စက်ရုံတွေအဖြစ် တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလျက်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေနံခေတ်ကမှ သဘာဝဓတ်ငွေ့ခေတ်ဆီ တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းနေကြတယ်။ ကမ္ဘာမှာ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ရှိနိုင်တဲ့ နိုင်ငံတွေအထဲမှာ ရုရှားက ပထမ၊ အီရန်က ဒုတိယ၊ မြန်မာက အဆင့် ၁၁ ရှိပါတယ်။ သဘာဝဓတ်ငွေ့တွေကို ပိုက်လိုင်းနဲ့သယ် - ဒါမှမဟုတ် LNG (Liquefied Natural Gas) လို့ခေါ်တဲ့ သဘာဝဓတ်ငွေ့ကို အားပေးပြီး အရည်အဖြစ် ပြောင်းပြီးမှ ရေနံတင် သဘောင်္တွေလို သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့တင် သင်္ဘောကြီးတွေနဲ့ သယ်ယူ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် တရုတ်က ရုရှား-အီရန်-ကာဇတ်စတန် ပိုက်လိုင်း ၃ လိုင်းသွယ်တဲ့ အစီအစဉ်လုပ်ခဲ့တယ်။
တရုတ်ပြည်ကြီးနဲ့ တိုးတက်ရေး စီမံကိန်းမှာ ပထမ အရှေ့ခြမ်း၊ အလယ်ခြမ်းနောက်မှ အနောက်ခြမ်းကို တိုးတက်အောင် လုပ်ဖို့စီမံကိန်း ရှိတယ်။ တရုတ်ပြည် အရှေ့ခြမ်းမှာရှိတဲ့ ရှန်ဟိုင်းတို့၊ ဘေဂျင်း (Beijing) တို့ဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ မြို့ကြီးတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ။ စက်ရုံတွေဟာလည်း တရုတ်ပြည် အရှေ့ခြမ်းမှာရှိတာကြောင့် ရေနံတင် သဘောင်္တွေဟာ တရုတ်အရှေ့ကမ်းမှာ စိုက်ကြရတယ်။ တရုတ်ပြည်အလယ်ပိုင်းနဲ့ တောင်ပိုင်းကို တရုတ်ပြည်အရှေ့ခြမ်းက ပို့ရင် မိုင် ၃ဝဝဝ ကျော် ဝေးတယ်။ ဒါကြောင့် တရုတ်က ရေနံကို မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နဲ့ မော်လမြိုင်ဘက်ကနေ ပိုက်နဲ့ ယူနန် ပြည်နယ်ကို ပို့ပြီး၊ အဲဒီကနေတဆင့် အလယ်ပိုင်းကို ပို့ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရခိုင်ပြည်မှာ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းကို တရုတ်က တည်ဆောက်ပေးနေတာပေါ့။ နအဖ က ရတဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့က တရုတ်အတွက် မပြောပလောက်ဘူး။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့ အာဖရိကရေနံတွေ အားလုံးဟာ တရုတ်ပြည် အရှေ့ခြမ်းကို ရောက်ဖို့ မာလက္ကာရေလက်ကြား Strait of Malacca ကျဉ်းကျဉ်းလေးကို ဖြတ်ရတယ်။ တကယ်လို့ တရုတ်နဲ့ အမေရိကန် စစ်ရေးအရ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရင် အမေရိကန်ရဲ့ ရေတပ်မတော် ၇ ဟာ မာလက္ကာရေလက်ကြားကို ပိတ်ခဲ့ရင် တရုတ်မှာ ပြဿနာရှိတယ်။ ဒါကြောင့် တရုတ်က ရေနံတွေကို မြန်မာနိုင်ငံကတဆင့် ယူနန်ကို တင်ရင် မာလက္ကာကို ဖြတ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ ဒါကြောင့် စစ်ရေးအရ မြန်မာနိုင်ငံဟာ တရုတ်အတွက် အခရာကျတယ်လို့ ဆိုနိုင်တယ်။
တရုတ်ပြည်ကြီးဟာ အလယ်ပိုင်း တိုးတက်ရေးအတွက် ရေကာတာတွေဆောက်၊ လမ်းတွေဖောက်နဲ့ စီးပွားရေး စီမံကိန်းတွေ လုပ်လျက်ရှိတယ်။ တရုတ်မှာ (Internal-Migration) လို့ခေါ်တဲ့ ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းမှု ရှိတယ်။ အလုပ်ရှားတဲ့ အလယ်ပိုင်း၊ အနောက်ပိုင်းက လူတွေက တရုတ်ပြည် အရှေ့ပိုင်းကို ပြောင်းကြတော့ မြို့တွေမှာ ပြည့်ကျပ်ပြီး လူမှုရေးပြဿနာတွေ တက်လာတာပေါ့။ ဒါကိုဖြေရှင်းဖို့ အလယ်ပိုင်းကို ဖိပြီးထူထောင်နေရတာ အလယ်ပိုင်း တိုးတက်လာရင် လိုအပ်မယ့် ရေနံကို မြန်မာနိုင်ငံကတဆင့် တင်ပို့ရမှာပေါ့။ တခါ ထုတ်ကုန်တွေကို ဧရာဝတီမြစ်က သယ်ချပြီး မြန်မာဆိပ်ကမ်းတွေက တင်ပို့ရင် တရုတ်ပြည် အရှေ့ခြမ်းကို တင်ပို့ရတာထက် သက်သာနိုင်တာကိုး။
ဒါကြောင့် သဘာဝ အနေအထားအရ မြန်မာပြည်ဟာ တရုတ်ပြည်ကြီး ခေတ်မီတိုးတက်မှုမှာ အတိုင်းအတာ တခုအထိ အရေးပါနေရတာပေါ့။ ဒီပြင် အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံတွေက တိုးတက်လာလေ၊ တရုတ်အတွက် ဈေးကွက် တိုးချဲ့ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ နေရာကောင်းလာဖြစ်တာပေါ့။ ထိုင်းနိုင်ငံထဲကို တာချီလိတ် မယ်ဆိုင်ကတဆင့် တရုတ်ပစ္စည်းတွေ လှိမ့်ဝင်လာတာကို ကြည့်ပါ။
ဒါကိုသိတဲ့ နအဖအစိုးရက တရုတ်ဖဲကို ဆွဲကိုင်နိုင်တာပေါ့။
အကိုင်မတတ်ရင် မြန်မာနိုင်ငံဟာ တရုတ်ရဲ့ စီးပွားရေးကျွန် ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ မျိုးချစ် Nationalist တယောက်အနေနဲ့ ရတက်မအေးစရာပါ။
စွမ်းအင်လုံခြုံရေး (Energy Security)
အိန္ဒိယနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံတွေမှာ ဆိုရှယ်လစ်စနစ် ကျင့်သုံးခဲ့လို့ ၂ နိုင်ငံစလုံး မွဲတေခဲ့ရတယ်။ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကို ကျင့်သုံးလာမှ တိုးတက်လာကြတယ်။ ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေလည်း ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ် ကျင့်သုံးလာတော့ တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ စွမ်းအင်ထုတ်ဖို့ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့တွေ လိုလာတယ်။ လိုအားနဲ့ ထုတ်နိုင်အား မမျှတတာကြောင့် ၂၁ ရာစုအစမှာ စွမ်းအင်လုံခြုံရေး Energy Security ဆိုတာကို စသုံးလာကြတယ်။ အီရန်က အနုမြူလက်နက်ရအောင် ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့် အမေရိကန်ကွန်ကရက်က အီရန်ကိုကူရင် စီးပွားရေး ဖြတ်တောက်မှုပြု Economic Sanctions လုပ်မယ်ဆိုပြီး ဥပဒေ ထုတ်ခဲ့တယ်။ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်က တရုတ်က သဘာဝ ဓတ်ငွေ့ လိုတာကြောင့် အီရန် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပရောဂျက်ကို ငွေအား၊ လူအား ကူညီခဲ့တယ်။ အမေရိကန်က ဒီနေ့အထိ တရုတ်ကို အပြစ်မပေးရဲဘူး။ ထိုနည်းတူ အမေရိကန်နဲ့ ပြင်သစ် ကုမ္ပဏီတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပါဝင်တာကို မပိတ်ပင်နိုင်ဘူး။ ဒါဟာ လက်တွေ့ စွမ်းအင်လုံခြုံရေး ပြဿနာပဲ။ နအဖ အစိုးရကို ကျန်တာတွေ ပိတ်ပင်ပေမယ့် စွမ်းအင်နဲ့ ပတ်သက်ရင် နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး ဖြစ်ကုန်ရော။ နအဖကို ကူညီနေတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကိုကြည့်ရင် တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ရုရှား၊ ကိုရီးယား၊ ဂျပန်နဲ့ အနောက်နိုင်ငံက ကုမ္ပဏီ အကုန်ပါကြတာပဲ။
နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီမှာ နိုင်ငံအကျိုးက အဓိကပဲ
နိုင်ငံတိုင်း နိုင်ငံတိုင်းဟာ သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒပေါ်လစီကို ချမှတ်ကျင့်သုံးရာမှာ သူတို့နိုင်ငံ အကျိုးကိုပဲ အဓိက ထားရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထာဝရ မိတ်ဆွေ၊ ထာဝရ ရန်သူဆိုတာ မရှိဘူး။ အကျိုးတူပဲရှိတယ်လို့ ဆိုကြတာ မဟုတ်လား?
ဒီသဘောတရားကို ကောင်းကောင်းနားလည်တာက နအဖ ဗိုလ်ချုပ်တွေပဲ၊ ရာဇပုလ္လင်ကို သေနတ်အားကိုးနဲ့ အတင်း တက်တိုင်ထားကြတော့ ရာဇပရိယာယ်အကြောင်း နားလည်ရမှာပေါ့ --- အာဏာအကြောင်း ကောင်းကောင်း နားလည်တာကိုး။
နားမလည်တာက ကျနော်တို့ အတိုက်အခံတွေဘဲ
ရှင်းတာက အနောက် ဥရောပနိုင်ငံတွေအတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်ပါ မြန်မာနိုင်ငံအရေးဟာ အဲဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ အကျိုးအတွက် ဘာမှ ထိရောက်မှုမရှိဘူး။ အနောက်နိုင်ငံတွေ မြန်မာ့အရေးကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာ ဒေါ်စုကြောင့် သက်သက်ပဲ။ ဒေါ်စုရဲ့ သတ္တိနဲ့ ဒေါ်စုရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ယုံကြည်မှုကို လေးစားသောအားဖြင့် လူ့အခွင့်အရေး ရရှိရေးအရ မှန်ကန်မှုဘက်က လိုက်လို့ Morality နဲ့ Human Rights အတွက် သက်သက် ကူညီအားပေးတာပဲ ရှိတယ်။
ဒါကြောင့် အနောက်နိုင်ငံတွေက ဖိအားပေးတယ်ဆိုရာမှာ အတိုင်းအတာ Limited ရှိတယ်။ သံတမန်နည်းနဲ့ ကန့်ကွက်တယ်။ ဖိအားပေးတယ်။ မရရင် တိုင်းပြည်အလိုက် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု လုပ်တယ်။ မရရင် အားလုံးပါအောင် ကုလသမဂ္ဂမှာတင်ပြီး လုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုလုပ်မယ်။ နောက်ဆုံးမရမှ စစ်အင်အားနဲ့ ဝင်တိုက်မယ်ပေါ့။ ဒါက အီရတ်ကိစ္စမှာ အမေရိကန် ဦးဆောင်တဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေက လုပ်ခဲ့တယ်။ အဆင့်ဆင့် ဖိအားပေးပြီးနောက်ဆုံး အမေရိကန်က ဝင်တိုက်ပြီး ဆက်ဒန်ကို ဖြုတ်ချခဲ့တာပဲ။
အီရတ်က ဆော်ဒီပြီးရင် ဒုတိယရေနံ အထွက်ဆုံးနိုင်ငံ အီရတ်။ အီရတ် က ကူဝိတ်ကိုသိမ်း အပြီး ဆော်ဒီကို ပါသိမ်း ပိုက်နိူင်တဲ့ရန်ရှိတာကြောင့်ပထမ အီရက်စစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ အီရတ်မှာ ရေနံရှိတယ်။ ဒါကြောင့် အမေရိကန် အကျိုးအတွက် ဝင်တိုက်ရတာ။ မြန်မာနိုင်ငံက အမေရိကန်အတွက် ဘာမှ အကျိုးမရှိပါ။
ဆူဒန်နိုင်ငံ ဒါဖါ (Darfur) မှာ ဆူဒန်အစိုးရဟာ မြန်မာ နအဖတွေထက် ရက်စက်တယ်။ ခရစ်ယာန်တွေကို နှိပ်စက်ရုံမက ကျွန်အဖြစ် ရောင်းစားခဲ့သေးတယ်။ ဒါကြောင့် ခရစ်ယာန် အသင်းပေါင်းစုံနဲ့ ဟောလိဝုဒ်နာမည်ကျော် မင်းသမီးတွေ ဝိုင်းအော်တာတောင် အမေရိကန်က စစ်သားတယောက်မှ မကူဘူး။ ထိုနည်း၎င်းပဲ မြန်မာ့နိုင်ငံအရေးမှာ စစ်ရေးအတွက် မစွက်ဖက်နိုင်ဘူး။ ကုလသမဂ္ဂ - UN မှာတောင် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို စီးပွားရေး (Sanction) ဆန်ရှင်လုပ်ဖို့ မလွယ်ဘူး။ နအဖက ဗီတိုအာဏာရှင် တရုတ်အပြင် အရံအဖြစ် ရုရှားကို ကိုင်တားတယ်။
အရှေ့မှာ ဖော်ပြထားသလို မြန်မာနိုင်ငံဟာ သဘာဝ အနေအထားအရ တရုတ်အတွက် အရေးပါတယ်။ တရုတ်အကျိုးကို ဆောင်နိုင်တယ်။ ဒီအတွက် နအဖက တရုတ်ကို ပေါင်း၊ တရုတ်ဖဲကို ကိုင်ပြီး အိန္ဒိယကို တခါကိုင်ခဲ့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သယံဇာတတွေကို ရောင်းပြီး အာဆီယံနိုင်ငံအဖွဲ့ ASEAN ကို ကိုင်ခဲ့ပြန်တယ်။ ဒီ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ အာဆီယံ သုံးပွင့်ဆိုင်ကို ထောင်ယူပြီး အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ သံတမန် ဖိအားနဲ့ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု လုပ်တယ်။ အခု တရုတ်ကို အားကိုးရတာများတော့ ရုရှားဆီကနေ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ အနုမြူနည်းပညာဝယ်ပြီး တရုတ်ကို Balance လုပ်ဖို့နဲ့ UN က အပို ဗီတိုရအောင် ရုရှားကို ပေါင်းခဲ့တယ်။ ရုရှားကလည်း ရေနံငွေတွေနဲ့ အင်အားတောင့်လာတော့ အမေရိကန်ကို ဂလန်ကဆန်လုပ်ချင်တာနဲ့ အတော်ပေါ့။
မနှစ်က နောက်ဆုံး UN မှာ မြန်မာ့ကိစ္စတင်ဖို့လုပ်တော့ တရုတ်ရော၊ ရုရှားကပါ ဗီတိုနဲ့ ပယ်ချခဲ့တယ်။ ပိုရှက်စရာ ကောင်းတာက NCGUB ကစကတည်းက UN ရုံးဖွင့်ထားတယ်။ လူတယောက်ကို တာဝန်ပေးထားတယ်။ ရုံးတခုလုံးနဲ့ လူတွေရှိတာတောင် မန်ဒဲလား (Mandela) ရဲ့ တောင်အာဖရိက အစိုးရကို နအဖ ဆွဲသွားတာကို မသိလိုက်ဘူး။
သံတမန်အရေးကို တကယ်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် သံတမန် စကားပြော (ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်) ပြောနည်းတတ်ရတယ်။ UN စည်းမျဉ်းနဲ့ လုပ်ရပ်တွေ သိရမယ်။ Wine & Dine လို့ခေါ်တဲ့ သံတမန်တွေနဲ့ ပေါင်းပြီး အရေးပါတဲ့ လူတွေနဲ့ မိတ်ဆွေဖွဲ့၊ ရင်းနှီးအောင် ကြိုးစားရတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ အင်္ဂလိပ်စကား ပြင်သစ်စကားပြော ကျွမ်းရမယ်။ စာဖတ်ရမယ်။ ကိုယ့်ကို လေးစားအောင် ပြောနိုင်ရမယ်။ တွေ့သမျှလူကို ပြုံးပြပြီး ကူကြပါပြောရုံနဲ့ မရဘူး။
နအဖ ဘက်က လျင်တယ်။ UN မှာ အင်္ဂလိပ် စကားပြောကောင်းတဲ့ သံတမန်တွေကို ထားတယ်။ ဦးဝင်းမရ တို့လို စိန်ပေါလ်ကအောင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စကား ကောင်းတဲ့ လူတွေကို UN မှာ ထားတယ်။ နိုင်ငံခြားရေးရုံးက သံတမန်တွေကို John Hopkins တို့လို နာမည်ရှိတဲ့ ကျောင်းတွေမှာ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းတွေ ပို့တယ်။ နောက်ဆုံး UN မှာ ကိစ္စပေါ်တော့ ဥရောပမှာ သံအမတ်လုပ်နေတဲ့ ဦးဝင်းမရနဲ့ ဒါဂျီလင်ကအောင်တဲ့ ဖိလစ်ပိုင်က သံအမတ် ဦးသောင်းထွန်းတို့ကို ဗိုလ်ချုပ် ၃ ယောက်နဲ့အတူ နယူးယောက်မှာ လနဲ့ချီထားပြီး စည်းရုံးတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်။
Targeted Sanctions လို့ခေါ်တဲ့ နအဖ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ ဒင်းတို့ရဲ့ သားသမီးတွေ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တပည့်တွေကို ဗီဇာ မပေးဖို့နဲ့ နိုင်ငံခြား ဘဏ်အကောင့် Account မဖွင့်နိုင်အောင် ပိတ်ပင်ခဲ့တယ်။ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားငွေလဲတာနဲ့ ပတ်သက်ရင် နယူးယောက်က (Clearing House) လို့ ခေါ်တယ်။ စိစစ်လဲလှယ် ပေးရတယ်။ နအဖက SWIFT လို့ခေါ်တဲ့ ဥရောပ Network ကိုသုံးပြီး ဒီစိစစ်မှုကို ကျော်ခဲ့တယ်။ SWIFT Network ထဲမှာ အမေရိကန် ဘဏ်ကြီးတွေ ပါတယ်။ တခါ စင်္ကာပူမှာ နာမည်အငှားနဲ့ Account ဖွင့်ပြီး သောင်းကျန်းနေကြပြန်တယ်။ ဗီဇာပိတ်နေပါတယ် ဆိုတဲ့ကြားက ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ သားသမီး ဆွေမျိုးတွေ အမေရိကားနဲ့ ဥရောပမှာ အနှံ့ပဲ။
နအဖ က အာဏာရှိတော့ ငွေရှာနိုင်တယ်။ ငွေနဲ့ အာဏာရှိတော့ မိတ်ဆွေတွေကို ဝယ်ယူနိုင်တာပေါ့။ နအဖ ကို ကျားကန်ပေးနေတဲ့ နိုင်ငံခြားသား ပညာရှင်တွေ အမြောက်အမြား ရှိတယ်။
ဂျပန်မှာလည်း နအဖက အလယ်အလတ် ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ ကုန်သည်ကြီးများ အသင်းကို ပေါင်းထားပြီး နအဖ အကျိုးအတွက် ဂျပန်အစိုးရဆီက အကူအညီရအောင် လုပ်နိုင်တယ်။ ဂျပန်ရောက် မြန်မာတွေဟာ အတက်ကြွဆုံး ဖြစ်ပေမယ့် အုပ်စုတွေများပြီး ထိရောက်တဲ့ ဖိအား ဂျပန်အစိုးရကို မပေးနိုင်ဘူး။ တနှစ် တနှစ် ဂျပန်က Phd ပါရဂူ ၄ဝ လောက် မြန်မာအစိုးရအတွက် ထုတ်ပေးနေတယ်။ အစိုးရဘက်က ထောက်ခံချက်မရဘဲ ကျောင်းတက်ခွင့်နဲ့ စကောလားရှစ် မရဘူး။
NGUB အဝေးရောက်အစိုးရ ကUN မှာလည်း လူရှိတယ်။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလည်း ရှိတယ်။ ပေါ်လစီနဲ့ ဗျူဟာ Strategy ဆိုတာ နားမလည် ဦးဆောင်မှုမပေးနိုင်တော့ ကမ္ဘာအနှံ့ မြန်မာတွေရှိလျက်နဲ့ ဘယ်ကို ဦးတည်ရမှန်း ဘာလုပ်ရမှန်း မသိကြတော့ လူများပြီး ပွဲမစည် ဖြစ်ရတာပေါ့။
NLD အပါအဝင် ကျနော်တို့ အတိုက်အခံတွေအားလုံး သတိမမူမိတာ ရှိတယ်။ အဲဒါက နိုင်ငံခြား၊ အထူးသဖြင့် အနောက်နိုင်ငံတွေကို အားကိုးလွန်းတော့ တရုတ်ဘက်ကကြည့်ရင် အတိုက်အခံဆိုတာ အမေရိကန်လူ။ အနောက်ဘက် ဒီမိုကရေစီတို့ရဲ့ နောက်လိုက်၊ သူတို့ အာဏာရရင် ငါတို့အကျိုးယုတ်လှချည်ရဲ့ ဆိုတဲ့ (အမြင်) ရှိတယ်။ တရုတ်ရဲ့ ပေါ်လစီက လှတယ်။ ခေတ်သစ် တရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေက မော်ခေတ်ကလို (မူ) ကို အသေမကိုင်ထားဘူး။ ရန်မလိုဘူး။ Confrontational မဖြစ်ဘူးလို့ ဆိုချင်တာပါ။ အေးအေးလေး တည့်အောင်ပေါင်းပြီး တိုးတက်အောင်လုပ်။ တဖြည်းဖြည်း စီးပွားရေးနဲ့ အနိုင်ယူတာပဲ၊ လူလည်ကြီးတွေပါ။
အမေရိကန်နဲ့ တရုတ်မတူတာက အမေရိကန်က စွာတယ် Aggressive ဖြစ်တယ်။ လူပါးဝတယ် Arrogant ဖြစ်တယ်။ တရုတ်က ညင်သာတယ်။ လူပါးမဝဘူး။ ပုခုံးဖက်ပြီးမှ တဖြည်းဖြည်း မျိုတာပဲ။ မျှမျှပြန်ကြည့်ရင် တရုတ်ကို တချိန်က အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ ဂျပန်တို့က မတရားအနိုင်ကျင့်ပြီး မတရား စော်ကားခဲ့ကြတယ်။ Boxer Revolution ဘောက်ဆာ တော်လှန်ရေးခေတ်ကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ အင်္ဂလိပ်တွေက Dog & Chinese Not Allowed ခွေးနှင့် တရုတ်တွေ မဝင်ရဆိုပြီး တရုတ်ပြည်မှာ တရုတ်တွေအပေါ် လူပါးဝခဲ့ကြတယ်။ ဒါကြောင့် တရုတ်တွေဟာ အနောက်တိုင်း၊ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်တွေကို အပေါ်စီးက မဆက်ဆံဘူး။ လက်ရှိအခြေအနေမှာ နယ်မြေကျူးကျော်လိုမှုလည်း မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် အတိုက်အခံတွေ အထူးသဖြင့် NLD က တရုတ်ကြီး အမြင်မှန်ရောက်အောင် ပေါ်လစီချ ကြိုးစားသင့်တယ်။ ဒီမိုကရေစီရရင်လည်း တရုတ်နဲ့ နယ်ချင်းဆက်စပ်နေတဲ့အတွက် ဘယ်အစိုးရမဆို သင့်မြတ်အောင် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရမှာပဲ။ မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ လူနည်းစု တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့တွေနဲ့ လူနည်းစုအဖွဲ့တွေဟာ တရုတ်သြဇာ မကင်းဘူး။
NCGUB ဆိုတာ အဝေးရောက် အစိုးရဆိုပေမယ့် တရုတ်နဲ့ ပုံမှန်ဆက်ဆံရေး မရှိဘူး။ ကျနော် သိရသလောက် အမေရိကန်တွေ အထင်လွဲမှာစိုးပြီး တရုတ်ကို မဆက်ဆံရဲဘူးတဲ့။ NLD (LA) က ဦးညိုအုန်းမြင့် တယောက်ပဲ တရုတ်နဲ့ Relationship ဆက်ဆံရေး ရှိတယ်။